Home Wararka Fahad Yasin oo saraakiil ka tirsan Boko Xaram lacag madax furasho ah...
Fahad Yasin oo saraakiil ka tirsan Boko Xaram lacag madax furasho ah ku iibsaday (Caddeyn)
Waxaa ciidamada amniga dowladda goboleedka Puntland ay gacanta ku dhigeen bishii Nofember 2 sanadka 2018 laba sarkaal oo tababaraayay kooxda Daacish ee ka dagaalanta Punland. Labadan sarkaal aya waxaa ay ka tirsan yihiin kooxda Boko Xaram ee ka dagaalanta dalka Nigeria.
Saraakiisha la qabtay ee kooxda Boko Xaraam ayaanan la ogeyn goorta ay soo galeen Soomaaliya iyo halka ay ka soo galeen, balse waxaa loo badinayaa in Puntland aay ka soo galeen dhanka badda.
Saraakiishan la qabtay waxaa ay ka mid yihiin dadka aadka loo raadinayo dalka Nigeriya waxaana loo haysto qaraxyo iyo dilal dhowr ah oo ay ka geysteen dalka Nigeriya.
Ciidamada Amniga Puntland ayaa la xiriiray safaaradda dalka Nigeriya ay ku leedahay magaalada Nairobi si ay u hubiyaan ragga ay gacanta ku hayaan oo sheegtay in aay yihiin Nigeriyaan tahriibaya. Xiriirka ay la sameeyeen Safaaradda aya si dhaqsa ah waxaa ugu soo jawaabay ciidamada amniga Puntland saraakiil ka tirsan safaaradda Nigeriya ay ku leedahay dalka Kenya.
Waxaa labada dhinac la isku afgartay in loo ogolaado saraakiisha safaaradda Nigeriya in ay wareystaan raggaas oo magacyadoo ay kala yihiin.
1. Maxamed Rabiyow Yacquub iyo
2. Aminu Isaq Muse.
Saraakiisha safaaradda Nigeriya waxaa markii hore loo gudbiyay magacyada ay raggaan sheegteen oo ka duwan magacooda rasmiga ah. Saraakiisha aya si dhaqso ah u yimid magaalada Muqdisho waxayna la fariisteen ku-simaha hay’adda NISA Fahad Yasin iyo nin magaciisa lagu sheegay Kullane oo lagu naaneyso Jiis Mariixaan iyo wiil qaba Fahad Yasin walaashiis oo magaciisa lagu sheegay Cabdixakiin.
Saraakiisha safaaradda Nigeriya aya weydiistay Fahad Yasin in lagu soo wareejiyo ragga ay hayaan, wuxuuna Fahad u sheegay in aanay hayn ragga ay sheegayaan. Saraakiisha safaaradda Nigeriya aya u sheegay in ay la hadleen ciidanka amniga ee Puntland. Fahad Yasin aya u sheegay saraakiisha Safaaradda Nigeriya in ay la xaajoodaan Puntland, maadaama ay hore ula hadleen iyagoon soo ogeysiin dowladda Federaalka ah.
Is faham waa kaddib saraakiishii safaaradda Nigeriya waxay go’aansaden in aanay dalka ka tegin waxayna la hadleen ciidankii amniga Puntland waxayna isla subaxii danbe diyaarad qaas ah ku tageen Puntland, waxaana lagu soo wareejiyay labadii nin.
Markii ay ku soo noqdeen magaalada Muqdisho, ayaa waxaa safaaradda Nigeriya ee dalka Kenya ay warqad u soo dirtay hay’adda socdaalka iyo jinsiyadda, iyagoo ka codsaday in labada nin si degdeg ah loogu soo gudbiyo dalka Kenya, (Fiiris lifaaqa nuqulka ay soo dirtay safaaradda) waxaana loo soo diray nuqul ka mid ah waraaqahooda socdaalka ee loo yaqaan (GO HOME) maadaama aanay baaasaboor lahayn labada nin.
Fahad Yasin ayaa ka warhelay in labada nin ay ka tirsan yihiin kooxda Boko Xaraam, waxaana uu xogta ka helay kooxda Shabaab. Fahad Yasin ayaa la xiriiray Koofi Amarna ku siiyay in markii ay timaado diyaaradda sida labada nin Nigeriyaanka ah in uu ku wareejiyo ciidanka NISA ee garoonka Adan Cadde.
Markii ay timid diyaaraddi siday labada nin aya waxaa diyaaradda dhexdeeda ugu tagay saraakiisha NISA ee garoonka Adan Cadde iyo Taliyaha Booliiska Garoonka Adan Cadde.
Labadii ayaa halka lagu katiinadeeyay waxaana lagu xiray xarunta CID. Safaaradda Nigeriya ee Kenya aya durba bilowday wadahal waxayna telefon kula hadleen Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, wuxuuna u sheegay in uu dalka ka maqan yahay ayna la xiriiri karaan wasiiru dowlaha wasaaradda Cabdulqadir Ahmed Kheyr oo ah nin uu Abti u yahay Fahad Yasin
Markii ay la xiriireen wasiiro dowlaha aya wuxuu ku wargeiliyay safaaradda Nigeriya una sheegay in ragga ay xiran yihiin baaritaanna uu ku socdo, intaa wax dhaafsiisana uusan ka warqabin. Arrinta aya cirka isku shareertay, waxaana ay diidanaayeen dowladda Nigeriya in la ogaado xogta dhabta ah ragga la hayo, maadaama ay sidoo kale raadinayeen sirdoonka Mareykanka, waxayna ka cabsi qabeen in raggaas gacanta loo geliyo Mareykanka.
Safaaradda Nigeriya iyo Fahad Yasin aya waxaa u bilowday wadahadal hoose, waxaana magaalada Nairobi tagay Cabdixakiin oo ah ninka ay u dhaxdo Fahad walaashiis, waxaana ugu danbeynta lagu heshiiya in dowladda Nigeriya ay bixiso lacag madax furasho ah.
MOL ma helin cadada lacagta inta ay tahay balse Fahad Yasin aya bishan Desember 10 markii ay ahayd u anbabaxay dalka Qatar maadaama uusan geli Karin magaalada Nairobi, waxaana safarka ku wehliyay Cabdixakiin oo wakiil ka ahaa Fahad wadahadalkii safaaradda Nigeriya iyo Fahad Yasin.
Fahad Yasin aya waxaa wada hadalkii iyo afgaradkii madax furashada labada nin uu ku soo dhameeyay safaarada dalka Nigeriya ay ku leedahay magaalada Dooxa ee dalka Qatar, maalintii taariikhdu ahayd 12 Desember ee sanadkan 2018.
Halka hoose ka daalaco caddeeymaha iyo dokumentiyada
Previous article(Faah Faahin) Masuuliyiin ku dhaawacmay Qaraxyadii maanta Muqdisho ka dhacay
Next articleSomalia: Awil Dahir of Universal TV among 10 killed in twin blasts in Mogadishu